မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: ပျော်ပြီးနောက်ပါးသွားခြင်း
aww mamelody. u really love to like funalady. even u pay double money then original price . then u listened and danced.
သူငယ်ချင်းတွေက မကြည့်ရရင် မပြန်ဘူး ကလပ်သွားမယ်ဆိုလို့ ကလပ်မသွားချင်လို့ ပေးဝယ်မိတာပါဟာ :)(အဟီး ရှက်စရာကြီး သူများလွှဲချရတာ)
မယ်လိုဒီရေ.. တသောင်းတန် လက်မှတ်နဲ့ ပျော်ခဲ့တယ်ပေါ့လေး) ဖတ်ပြီး ဂျစ် ပါဝိုင်းပျော်ပေးလိုက်တယ် ။
နားကပ်ပျောက်ပြီး ထီပေါက်သွားတာကိုး တနားပါတယ် :P ဟတ်ဟတ်
ပျော်ပြီးနောက်ပါးသွားခြင်း ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကိုတွေ့တော့ ဘာပါလိမ့်လို့ တွေးမိသေးတယ်။ တဆက်တည်း ဖြစ်နေလို့။ :D အစပိုင်း ရေးတာဖတ်ပြီးတော့မှ ပျော်ပြီးနောက်… ပါးသွားခြင်း လို့ ဖြတ်တောက် တွေးမိတယ်။ ပိန်းပုံများ။ :)အမှန်က ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ ပါရင် ပိုကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိတယ်။ အဲဒီရှိုးပွဲ အခွေထွက်မယ်ထင်တယ်နော်။
မလွယ်ပါလား မမယ်လိုဒီမောင် .. မျိုးကြီးအစား မင်းကြီးကို ပြောင်းကြိုက်လိုက်ပါလား .. နိုက်ကလပ်အစား နတ်ကနား ဆိုရင်တော့ .. ပိုက်ဆံမကုန်တဲ့ အပြင် ပိုက်ဆံတောင်ရအုံးမယ်။ ခေါင်းပေါင်းကြီးပေါင်း ပုလင်းကြီးတစ်ဖက် ကြက်ကျော်ကြီးတစ်ဖက်နဲ့ “ဟေ့ MM Blogger တွေ မယ်လိုဒီကြီးကို (အဲယောင်လို့) ကိုယ်တော်ကြီးကို Internet ဖိုးလေး ဆက်ကြစမ်း” ဆိုရင် .. မိုက်ပ .. ဟီး .. ဟီး ..နားကပ်ကျပျောက်သွားပုံထောက်တော့ .. မျိုးကြီးရော အငဲပါ တော်တော် ၀င်ပူးသွားပုံရတယ်။ စိတ်လေးဘာလေးညိမ်အောင် ဂုဏ်တော်ပုတီးလေးဘာလေး စိတ်ရင်စိတ် .. ဆရာတော် ဦးဇောတိက စာအုပ်လေးဘာလေး ဖတ်ပေါ့ ဗျာ .. စတာနော် .. ချိတ်မချိုးနဲ့သားတော်ကြီး ကိုတိုး
>> မဂျစ် ၀ိုင်းပျော်ပေးလို့ 5000 ကျပါတယ်>> ကိုချမ်းက သနားတယ်ဆိုရင်လဲ နားကပ်အသစ်လုပ်ဖို့ ပိုက်၂ချေးပါလား>> ကိုစေးထူးကြီးကတော့ နောက်တခါ ဓါတ်ပုံလေးတွေ တင်နိုင်ဖို့ ကင်မရာလေး ၀ယ်ပို့ပေးလေ အကြွေးနဲ့ ပေါ့ ဒီမိုကရေစီရရချင်း ပြန်ဆပ်ပါ့မယ် ဟဲဟဲ>> ကိုတိုး အစုတ်ပလုတ်တုတ် ကိုယ့် ဘလော့ကိုယ်တော့ ပို့စ်အသစ်မတင်ပဲ နတ်ကန္နားပွဲတွေ လျှောက်လိုက်ကနေပြီးတော့ နာ့ ဘလော့ မှာလာပြီး ဘယ်တော့မှ အကောင်းလဲပြောဘူး သွား